Hafatry ny CEO - Drotrong Chinese Herbs Biotech Co., Ltd.
Ry namana malala,
Tongasoa eto hitsidika ny tranokalan'ny Drotrong Chinese Herb Biotech Co., Ltd. Misaotra anao tamin'ny fiheverana sy ny fanohananao. Tiako ny milaza ny fisaorana lehibe anao ho an'ny mpiara-miasa aminay.
Hatramin'ny 1995, Drotrong Chinese Herb Biotech Co., Ltd. dia nirotsaka tamin'ny fananganana indostrialy manontolo ny ahitra sinoa, izay ahitàna ny zana-ketsa ahitra, fambolena, fanodinana voalohany, fanodinana lalina, fitrandrahana ala ary fivarotana. mifikitra hatrany amin'ilay fotokevitra ”mandroso orinasa izahay, mahatsapa fiaraha-miasa mandresy fandresena, manome fanomezana ho an'ny fiarahamonina sy ny olombelona”. Izahay dia manolo-tena hampivelatra ny indostrian'ny fanafody ahitra sinoa miaraka amina toetra siantifika, mazoto, manavao ary henjana.
Amin'izao fotoana izao dia manome vokatra avo lenta ho an'ny orinasa mpamokatra fanafody fanta-daza, mpanamboatra kosmetika ary ozinina fakana zavamaniry ao an-toerana sy any ivelany izahay, ary mahazo ny fahatokisana sy fiderana avy amin'ny mpanjifanay. Hainay ny mamaly ny fitakian'ny tsena ary matoky izahay fa hanao vahaolana tena tsara ary hiantoka ny fiasan'ny vahaolana tanteraka, ny fiasa mahomby ary ny hiovaova amin'ny fotoana rehetra.
Nandritra izay 25 taona lasa izay dia nandray ny andraikitray ara-tsosialy foana izahay. Io no safidy tsy azo ihodivirana hahazoana fampandrosoana maharitra. Izahay dia tsy mitsahatra mitady vokatra avo lenta, teknolojia avo lenta ary talenta matihanina. Ao anatin'ny vanim-potoana vaovao, dia hijery sy hanova ny fomba fandraharahana isika, hanohy hanavao sy hanao fandrosoana hahatanteraka ny fampandrosoana maharitra. Hanao ny anjara birikinay izahay amin'ny fampandrosoana ny indostrian'ny fanafody sy ny fahasalaman'ny zanak'olombelona.
Manantena mafy aho fa miaraka amin'ireo mpanjifantsika vaovao sy taloha, andao hiara-mamorona ho avy tsaratsara kokoa isika!